Kaddib Guushii Taariikhiga Ahayd Ee Xalay, Tababare Ernesto Valverde Oo Shaaciyey Sirtii Ka Caawisay Inay Garaacaan Sevilla - Latest football news
Kaddib Guushii Taariikhiga Ahayd Ee Xalay, Tababare Ernesto Valverde Oo Shaaciyey Sirtii Ka Caawisay Inay Garaacaan Sevilla
Barcelona ayaa xalay samaysay taariikh cusub kaddib markii ay 6-1 ku garaacday Sevilla oo ay garoonka Camp Nou albaabada iskugu xidheen kulanka labaad ee tartanka Copa del Rey.
Barcelona oo ciyaartii hore lagaga adkaaday 2-0 ayaa si layaab leh uga soo kabatay xalay, waxaanay ugu beddeshay 6-1, taas oo ka dhigan in semi-finalka tartankan ay iskaga xaadirisay 6-3 ay ku dhaaftay Sevilla, waxaana ugu dambaysay Barca inay kasoo kabato guul-darro 2-0 ah oo Koobka boqorka ah muddo laga joogo soddon sannadood.
Tababare Valverde oo ciyaarta kaddib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay kulankan ay guusha ku heleen dedaal iyo fursadihii ay heleen oo ay ka faa’iidaysteen, sirta gooshooda ee xalayna ay taas tahay, halka kulankii hore ay iska khasaariyeen fursado badan oo goolal noqon karayey gaar ahaan qaybtii hore.
Tababaruhu waxa kale oo uu tilmaamay in sannadkan ay kooxdiisu ku hamiyeyso inay ku wada guuleysato dhamaan tartamada ay ka qayb-gelayso, aadna ay ugu farxeen guushan ugu dambaysay oo ay ka heleen dhiiranaan hor leh.
Tababaraha oo si gaar ah loo weydiiyey waxa u sahlay inay guusha intan le’eg ka gaadhaan Sevilla, ayaa waxa uu yidhi: “Waxaanu xallinay waxyaabo jiray.”
Tababaruhu waxa kale oo uu tilmaamay inay jiraan mararka qaarkood oo ay wax kasta kaa hor imanayaan, waxaanu yidhi: “Waxa mar kasta jira xilliyo ay ciyaartu ku diidayso. Lugtii hore, waxaa jirtay xaalad aanaan goolkaba dhalin karaynin, waxaanay Sevilla nagu garaacday qaybtii labaad oo ay fiicnayd. Laakiin ciyaartan waxaanu ku bilownay cadaadis, xilli hore ayaanu gool ka dhalinay, waxaanu gaadhsiinay 4-1, kaddibna waxaanu ka faa’iidaysanay fursadihii.”